पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्मका घटना फेरि दोहोरिए के होला?
नेपाल लाइभ बुधबार, जेठ २२, २०७६, २०:४०
पृथ्वीको उत्पत्ति आजभन्दा लगभग ४६० करोड वर्ष पहिले भएको मान्यता छ। पृथ्वीमा प्राणीको उप्तत्ति भएको कम्तीमा पनि ३७३ करोड वर्ष पहिले भएको मानिन्छ। यदि ४६० करोड वर्षअघिको यो प्रयोग दोहोरिने हो भने फेरि पनि मानिसजस्तै प्राणीको अस्तित्व पाइएला? कि प्राणीको उत्पत्तिलगायतका विषय बिल्कुलै भिन्न होलान्?
सन् १९८९ मा अमेरिकाका एक वैज्ञानिक स्टिफेन गोउल्डले उनको पुस्तक ‘वन्डरफुल लाइफ’ मा एक यस्तै उटपट्याक प्रश्न उठाएका छन्। उनले उठाएको प्रश्न थियो, हाम्रो पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्मको समय फेरि दोहोरिने हो भने (अथवा दोहोर्‍याउने हो भने) यसको परिणाम के आउला?
यस्तो अवस्थामा हामीजस्ता मानिस धर्तिमा पाइन्छौं होला वा पाइदैनौँ होला? जीवको उत्पत्तिसम्बन्धी आजसम्म मानिएका विषयको नतिजा सही साबित होला कि फरक? यो कल्पना हाम्रो दिमागभन्दा परको विषय हो। वास्तविकता यही हो कि हामी यस्तो प्रयोग गर्न सक्दैनौँ तर गोउल्डले उठाएको विषयवस्तु कम रोचक छैन।
पृथ्वीको उत्पत्ति ४६० करोड वर्ष पहिले भएको र यसमा प्राणीको उत्पत्ति भएको ३७५ करोड वर्ष भइसकेको कुरा हामी आज आएर बुझ्न सक्दैनौं। तर वास्तवमा नै यो प्रयोग फेरि एकपटक दोहोर्‍याउने हो भने के होला? यस विषयमा कुनै निश्चित जवाफ त हामी कसैसँग पनि छैन। यो विषयमा यसै भन्न पनि निकै कठिन छ।
यो विषयमा सायद गोउल्ड पनि जान्दैनथे होला। तर १९८८ मा उनको पुस्तक छापिनुभन्दा एक वर्षमात्र पहिले अमेरिकामा नै एक प्रयोगशालामा यो विषयमा खोजी सुरु भएको थियो। सो अध्ययनले पिन उनले उठाएको प्रश्नको उत्तर खोज्न मद्दत गरेको देखिन्छ।
यो प्रयोग वैज्ञानिक रिचर्ड लेस्कीले २४ फब्रुअरी १९८८ मा 'ई कोली' नामक एक साधारण ब्याक्टेरियावाट शुरु गरेका थिए। यो ब्याक्टेरिया साधारणतया हाम्रो शरिरभित्र पनि रहने गर्दछ। अब हेरौं यो साधारण ब्याक्टेरियाको परिक्षणबाट हामी गोउल्डको यति ठुलो र गम्भीर प्रश्नको उत्तर कसरी खोजी गर्न सक्छौं।
तर यो कुरा पत्ता लगाउनुभन्दा पहिला लेस्कीको प्रयोग सम्झन आवश्यक छ। हामीलाई प्रकृतिको छनौट सम्बन्धी सिद्धान्तका विषय पनि सम्झन जरुरी हुन्छ। उदाहारणका लागि कुनै आवादी क्षेत्र (मानौं जंङ्गल)मा जनावार बस्ने गर्दछन्। यस्तोमा कुनै नवजात शिशुको जन्म हुन्छ तर उक्त क्षेत्रमा रहनका लागि ऊ स्वस्थ्य छैन भने लोप भएर जाने हुन्छ।
यही बस्तीमा कुनै नयाँ बच्चा जन्मियो र ऊ आफ्ना बाबुआमाभन्दा पनि सक्षम छ भने उसले त्यहाँको क्षेत्रफल नै कब्जा गर्न पनि सक्छ।
यो सामान्य सिद्धान्त चाल्र्स डार्बिनले प्रतिपादन गरेका थिए। १९५९मा उनको प्रकृतिको छनौट सम्बन्धी सिद्धान्त आएको थियो।
यही सिद्धान्तको जगमा टेकेर लेस्कीले शीशाको फ्ल्यास्कमा पानी भरेर पोषक तत्वसमेत राखेर ब्याक्टेरिया हालिदिन्छन्। यस्तो अवस्थामा उक्त ब्याक्टेरिया केही घन्टामै विस्तार हुँदै जान्छ फ्ल्यास्कभित्र रहेको सबै पोषकतत्व ब्याक्टेरियाले समाप्त गरिदिन्छ। यसपछि यो प्रयोग पनि यहीँ समाप्त हुन्छ।
यस्तो नहोस् भनेर पोषक तत्व समाप्त हुनुभन्दा पहिले नै लेस्कीले पहिलो फ्ल्यास्कबाट केही ब्याक्टेरिया निकालेर नयाँ फ्ल्यास्कमा राखिदिन्छन्। दोस्रोमा पनि पहिलोझैँ केही पोषकतत्व राखिएको थियो। ब्याक्टेरियाले सोही पोषक तत्व खाँदै तीव्र रुपमा वृद्धि भइरहे।
यस्तो गर्दा दैनिक ब्याक्टेरियाका लगभग १० प्रजाति देख्न सकिन्थ्यो। यो लेस्कीको चतुरतापूर्ण प्रयोग थियो। विस्तारै संख्या बढ्दै जाँदा केही ब्याक्टेरीयाहरु यस्ता पैदा हुने हुन थाले कि जो सुरुका भन्दा चतुर र छिटा थिए।
यसरी प्रयोग गर्दै जाँदा खानाको अभाव हुन थाल्यो। यसपछि एउटा यस्तो समय आयो कि एक एक ब्याक्टेरियाले अर्कोलाई खान थाल्यो। कमजोर ब्याक्टेरियाहरु बलियोको शिकार हुन थाले। यही प्रयोगलाई प्रकृतिको छनौट सिद्धान्त भनिन्छ।
लेस्कीको यो प्रयोगशालामा १९८८ देखि अहिलेसम्म लगभग ३० वर्ष बितिसकेको छ। यस अवधिमा ब्याक्टेरियाका एक लाख पिँढीको को अध्ययन गरिएको छ। यसबाट के गोउल्डले उठाएको प्रश्नको उत्तर आउँछ त?
लेस्कीसँग यसको पनि जवाफ पनि छ। जब १९८८ मा उनले ब्याक्टेरियामाथिको प्रयोग सुरु गरेका थिए। उनले १२ फ्ल्यास्कमा यो प्रयोग सुरु गरेका थिए। उनको प्रयोगशालामा कैयौं वैज्ञानिक हरेक बिहान आएर एक फ्ल्यास्कमा रहेको ब्याक्टेरीया निकाल्ने र नयाँ फ्ल्यास्कमा राख्ने गर्दछन्। यसरी उनीहरुले एक लाख पिँढी ब्याक्टेरियाको केवल एक पटक मात्र होइन, दर्जनौं पटक अध्ययन गरिसकेका छन्।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि उनका एक दर्जनभन्दा प्रयोगको नतिजा एउटै आयो कि फरकफरक? यो प्रश्नको उत्तर गोउल्डको प्रश्नले दिन्छ।
लेस्कीको यो प्रश्नको उत्तर फेला पार्न २५ वर्ष लागेको छ।
अब ३० वर्षपुग्दा निकै अचम्मलाग्दा नतिजा आउन थालेका छन्। प्रयोगको सबैभन्दा अचम्मलाग्दो नतिजा १२ मध्ये १ 'ई कोली' ब्याक्टेरियाबाट बेग्लै नस्ल बन्ने गरेको पाइएको छ। यसरी १ लाख पिँढीको अन्तरालमा केही यस्ता परिर्वतनहरु देखिएका छन् कि आज त्यसलाई 'ई कोली ब्याक्टेरिया' भन्न सकिँदैन।
अर्को रोचक कुरा के छ भने बाँकी ११ प्रयोगमा कुनै परिवर्तन आएको देखिएन। ती ब्याक्टेरिया अहिलेपनि 'इ-कोली ब्याक्टेरिया'कै लक्षणमा रहेका छन्। एक लाख पिँढी आ-आफ्ना तरिकाबाट वृद्धि हुने गर्दछन्। सबैजसो ब्याक्टेरिया सुरुवातमा तीव्रगतिमा वृद्धि हुन्छन्। यसलाई सुक्ष्म रुपमा हेर्दा पहिला र अहिलेका ब्याक्टेरियामा अन्तर देख्न सकिन्छ।
फेरी फर्कौं गोउल्डको प्रश्नतर्फ नै। उनी अहिले धर्तीमा जीवित छैनन्। २००२ मा उनको निधन भइसकेको छ। यदि उनी आज जीवितै भएको भए यी नतिजादेखेर आफ्नो प्रश्नको उत्तर खोजी गर्थे होला।
मेरो विचारमा गोउल्डको प्रश्नको उत्तर यस्तो हुनसक्छ- यदि पृथ्वीको पुनः एक पटक उत्पत्ति हुने हो वा गराउने हो भने यसमा कुनै निर्धारित तर्क हुन सक्दैन। ४६० करोड सालपछि मानव जाति हालकै अवस्थामा हुनेछ भनेर निर्क्योल गर्न सकिने अवस्था लेस्कीको अध्ययनले प्रमाणित गर्दैन। हालको मानवीय अस्तित्व जीवित हुनुमध्ये एक विकल्प मात्र हो।
पृथ्वीमा मानव अस्तित्व हुनु भनेको लेस्कीको १२ मध्ये ११औं प्रयोगको प्रतिनिधि मात्र हो वा हामी १२औं भएर अस्तित्व बचेको हो। यदि यसो हो भने यो हाम्रो भाग्य नै भएको मान्नु पर्ने हुन्छ।
लेस्की यो प्रयोग ३० सालदेखि निरन्तर चलेको हो। उनी सुरुवाती समयमा यस प्रयोगका लागि आर्थिक अभावमा रहेका थिए। उनले विस्तारै आर्थिक संकलन गर्दै निरन्तरता दिँदै आए। यसैको परिणाम यी ३० वर्षमा उनले धेरै अचम्मलाग्दा परिणामहरु पाइएका छन्।
यस प्रयोगको चुनौती चाँहि लेस्कीको प्रयोगले निरन्तरता नपाएपछि हुन्छ। उनीपछि यो प्रयोगको जिम्मेवारी उठाउने कोही आएनन्।
उता गोउल्डको किताब 'वन्डरफुल लाईफ'को शीर्षक चाँहि सन् १९४६ बनेको चर्चित फिल्म 'इट्स अ वन्डरफुल लाइफ'बाट प्रेरित थियो। फिल्मका नौजवान पात्र जर्ज बेलीका माध्यमबाट देखाइएको छ। यसको सार चाँहि जीवन आकास्मिक हो भन्ने हो।
(यो सामग्री नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले द वायरको हिन्दी संस्करणबाट अनुवाद गरेका हुन्।)